အမေရိကန် စစ်တပ်နဲ့ လိင်ပြောင်း စစ်မှုထမ်းများ သမိုင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆောင်းပါးကဏ္ဍ အမေရိကန် စစ်တပ်နဲ့ လိင်ပြောင်း စစ်မှုထမ်းများ သမိုင်း
Capt. Jennifer Peace in her military uniform after coming out to her unit about beingatransgender female. Peace, who has been stationed to Fort Huachuca, said she still loves being in the Army despite the struggles.
Previous articleမန္တလေးမြို့ ရွှေမန်းတောင် ဂေါက်ကွင်းက အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံထားရသူတွေ သပိတ်စခန်း ဖွင့်ခဲ့ (ရုပ်/သံ)
Next articleMCN နေ့စဉ် ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် ကြာသပတေးနေ့
2019 Novel Coronavirus အဆုတျရောငျရောဂါနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ သိကောငျးစရာမြား